१ सय १९ जनाको बथान किन चाहिएको हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई ? तन्त्र बदलियो, प्रणाली बदलियो,समय बदलियो तर यी नेताहरुको व्यवहार भने कहिल्यै बदलिएन ।
कामन सिंह पाख्रिन
आफ्नो पदावधि जसरी थपे नि टुंग्याए नि सानोलाई ऐन ठूलोलाई चयन त हो नि । आखिरी थप्नु पर्नेलाई अनेक बाहनामा थपिहाल्छन् । राज्यको ढुकुटी रित्याउने, महंगी बढाउने, बेरोजगार बनाउने बिदेश धपाउने र पठाउने त हो । जुन परिवर्तनको उपमा दिएपनि त्यो भन्दा अरु के नै भएको छ र !
६ वर्षमा बल्ल बल्ल शिक्षक सेवा आयोगले लोकसेवा खुलायो । त्यो पनि कोटा नै बढी छ । ६ वर्षमा झण्डै १२ हजार सरकारी रोजगारी खुल्दा ५ हजार ५०० कोटामा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिने कहाँको न्याय हो ? यस तर्फ पनि ध्यान दिनुप¥यो ।
आशबहादुर जीको दुःख पढ्दा भक्कानिए । मलेसिया जान खोज्नुभएको रहेछ । तर मेरो अनुभवले भन्छ, घरबारि बेचेर मलेसिया नजानुहोस् । बरु घरबारि बेचेको आधा पैसाले ऋण तिरेर आधा पैसाले देशमा नै केही गरे राम्रो होला कि ?
सरकारी गाडीमा उल्टो सिट हटाउने काम त भयो । तर, हटाइएको सिटमा उभिने व्यवस्था कहिले हटाउने ? महिला पुरुष एकै ठाँउमा कोचाकोच गरी उभिदा सारै गाह्रो भो जीउदै मरेको जस्तो महशुस हुन्छ । यो कुरालाई कहिले अनि कस्ले मनन गर्ने ?
हामी पश्चिम नेपालमा छाउपडि र छुवाछुत जस्तो कुप्रथा कायम हुनुमा काठमाडौंमा बसेर त्याहाँका नागरिकको अज्ञानता, शिक्षा र जनचेतनाको कुरा गर्छाै । तर, काठमाडौं जस्तो शिक्षित र सभ्य मानिस बस्ने शहरको कुरा गरौ त । बाग्मति सरसफाई अभियान चलाएको बर्षाै भयो, फोहोर उठाइन्छ अनि अर्काे साता सोहि ठाउँमा फोहर जस्ताको त्यस्तै हुन्छ ...
दुखि जनताको पसिनाबाट १–१ गरेर जम्मा भएको करको राज्यकोषबाट किनेको गाडिमा आगो लगाउनु जुन सुकै बहाना भए पनि यो महाअपराध हो । यो गाडी जलाएर कसलाई फाइदा भयो ? अरु पनि धेरै विकल्पहरु छ्न आन्दोलनका, तर यस्तो पारा किन देखाउने मानव भएर । यसको क्षतिपूर्ति तिनिहरु बाट नै असुल्नु पर्छ । ता की दुखी गरिब नागरिकबाट कर उठ...
काठमाडौंबाट बीरगञ्ज चल्ने सुमोले धेरै भाडा लिने गरेका छन्। काठमाडौंबाट जादा रु ५०० मा बीरगञ्ज पुर्याउछन्। तर बीरगञ्जबाट काठमाडौं आउँदा भने एक व्यक्ति १००० रूपैयाँ सम्म लिने, बिल भने ५०० रूपैयाँ को नै दिने गर्छन्। बाटोमा ट्राफिकले सुमो रोकेर सोधे भने रु ५०० लियो भन्न लगाउँछन्। यसरी सुमो चढ्नेलाई बाध्यतामा परिरहेक...
मदनकुमार श्रेष्ठ/ कतार
मेरो गाउँमा न बिजुलीको सुविधा छ न खानेपानीको । राम्रो स्कुल र स्वास्थ्य उपचारको त कुरै नगरौं । परिवारलाई सुखले राखौंला भनेर विदेश आए तर विदेशको मेरो कमाइले घरमा परेको सबै भ्वाङ टाल्न सक्दैन । यस्तो चालाले कसरी बनाउनुहुन्छ पाँच वषएभित्र विदेशिनु नपर्ने वातावरण ?
नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा नेपाली जवान तैनाथ गर्ने भन्ने समाचार सुनेर खुसी लाग्यो । तर केही अधिकार पनि दिइएको छ कि, खालि देखाउनका लागि मात्रै ?
जय नारायण/ मलेसिया
घरको समस्या सामाधान गर्नको लागि हामी विदेश लाग्छौँ तर विदेशमा पनि समस्या नै समस्याको सामना गर्नुपर्दा आफ्नो मातृभूमि र जन्मभूमिको यादले सताइरहन्छ। काम त गर्नु नै छ जहाँ बसे पनि तर आँखाबाट आसु त्यो बेला झर्छ जब हामी आफ्नै नेपाली साथीबाट हेपिन्छौँ र लुटिन्छौँ। यदि हामी अनुशासनमा रही काम गर्‍यौँ भने यहाँको लोकल मान्छ...
थुलुङ अनिल राई
ए यो एकताको संकेत हो कि कता कता को संकेत हो। खै यस्तै पारा हो भने त एमाले माओबादिको एकता हुने कुरामा शंकै लाग्छ आधावर्ष भन्दा पनि बढै भैसक्यो एकता हुने कुरा। अब त झन ब्यानर पनि अलग अलग रे। यसै प्रसंगमा नविन किशोर व्यंग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ हो रैछ, हुन हुन लागेछ एकता त । नागरिकलाई बेबकुफ बनाउन यो भन्दा गतिलो उ...